आइसिसी वल्र्ड क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप : २४ खेलाडी छानियो, को को परे ? - Kantipath.com
खेलाडी छनौट गर्न गएको ६ गतेदेखि ११ गतेसम्म सुपर लिग खेल खेलाइएको थियो । गएको वर्ष खेलाडीले गरेका प्रस्तुतिका आधारमा सुपर लिगका लागि ५२ खेलाडी छनौट भएका थिए । ५२ जनाबाट क्लोज क्याम्पका लागि २४ खेलाडी छनौट भएका हुन् ।
५२ खेलाडीलाई ४ टिममा विभाजन गरेर खेल खेलाइएको थियो । सुपर लिगमा खेलाडीले गर्ने प्रदर्शनका आधारमा राष्ट्रिय टिमका लागि खेलाडी छनौट गरिएको हो । खेलाडी छनौटमा आइसिसीका प्रतिनिधि वेनकटपथि राजु, कोच जगत टमाटा, कप्तान पारस खड्का थिए ।
को को परे उत्कृष्ट २४ मा ?
Previous Previous post: फिल्म ‘दर्पण छायाँ २’ को ट्रेलर रिलिज
Next Next post: प्रेम दिवस : गुलाबको आयात आधाले घट्यो
एसीसी इमर्जिङ कप : नेपालले पाकिस्तानलाई १८१ रनको चुनौती
प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता आज सुरु
ईण्डिया र वेष्ट ईण्डिज टी–२० सिरिज आज वाट सुरु
बंगलादेशविरुद्ध नेपालले पहिला ब्याटिङ गर्दै ,नेपाललाइ जित्नै पर्ने दबाब